Sudan: Militariga oo digniin u diray shacabka banaanbaxa weli wada • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sudan: Militariga oo digniin u diray shacabka banaanbaxa weli wada
Sudan: Militariga oo digniin u diray shacabka banaanbaxa weli wada
May 1, 2019 - By: Axmed Muuse
Militariga dalka Sudan ayaa sheegay inay digniin kama danbeys ah u dirayaan shacabka weli banaanbaxa ka wada caasimada dalkaasi ee Khartuum.
Digniintan ayaa kusoo beegantay xili ay weli ururada rayidka ah iyo militariga isku khilaafsan yihiin Guddiga noqonaya Maamulka Kumeel gaarka ah.
Taliska Militariga Sudan oo awooda la wareegay 11kii bishii April kadib markii xilka laga xayuubiyey Madaxweynihii hore Cumar Al Bashiir ayaa doonaya in guddiga maamuli doona dalkaasi uu noqdo 10 xubnood oo ay 7 kamid ah yihiin Saraakiisha militariga halka ururada shibilka ay metalaan 3 xubnood oo kaliya.
Balse ururada rayidka ah ee banaanbaxa ka wada dalkaasi ayaa sheegay inay doonayaan in guddiga uu noqdo 15 xubnood isla markaana 8 xubnood ay qaataan ururada shibilka ah halka militariga lasiiyo 7 xubnood.
Hogaamiyayaasha metala ururada shacabka kacdoonka wada ayaa sheegay in militariga uusan daacad ka ahayn in xukunka uu ku wareejiyo maamul shibil ah isla markaana ku baaqay in maalinta khamiista ah 2da May ay qabtaan banaanbax aad u balaaran.